Azia atsimo: Mihaino bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2019 3:23 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy 27 janoary 2006)
Anisan'ny lohahevitra soratan'ny blaogera ao Bangladesh ny fitrohana mozika amin'ny alalan'ny aterineto, ny sehatra fibilaogina vaovao ary ny mpilatro iray lasa mpandraharaha manampy ny mpanao asa tanana sy ny mpanenona ao an-toerana.
Manana torohevitra i Salam Dhaka amin'ny toerana itadiavana hira bengali amin'ny aterineto. Adda kosa manoratra ny rivotry ny fiovana any Azia Atsimo, ary indrindra ny any Bangladesh. Nosoratany ihany koa ny fampidirana orinasa norveziana eo amin'ny sehatra fibilaogina ao amin'ny fireneny. Razib indray manana tantara mahaliana momban'i Bibi Russel, bangladeshita mpilatro niova ho mpamorona, izay miara-miasa amin'ny mpanao asa-tanana sy mpanenona eny an-toerana any Bangladesh.
Vakio ny boky ngeza indrindra manerantany. Miha-lasa toerana falehan'ny olona i Buthan ary ity no famariparitan'i Aaron an'i Bhutan, raha manana fijery mahafinaritra momba ity firenena lavitra miorina ao Himalayas kosa i Amelopsis.
Tokony sa tsy tokony…Bangalore sa Bengaluru? mety mahazo anarana vaovao ity tanàna Atsimon'i India, fantatra amin'ny anarana hoe “Silicon Valley of India” ity, izay lasa fototry ny adihevitra mahaliana eo amin'ireo blaogera Indianina. Amardeep indray manana lahatsoratra momba ity lohahevitra mafana ity. Mavesa-danja ny sakafo any Azia Atsimo ary ity misy sary sy bilaogy mahaliana avy any India. Miteny mafy kokoa noho ny teny ny sary, ary ity misy sarina sakafo Gujrati mampilendalenda, raha miresaka momba ny fitsatohana trondro amin'ny fomba Indianina kosa i MyDhaba. Jereo hoe fa maninona i Supersaps no mihevitra fa tsy mitovy tsiro avokoa ny sakafo Indianina rehetra.
Nepal sy ny cricket, tsy azo ampiarahana ireo teny roa ireo rehefa mieritreritra ity firenena ao Hymalaya ity ianao. Vinavinao ny hoe manana ekipa cricket i Nepal. Manana lahatsoratra momba izany i Uzwal. Manoratra momba ny zava-misy ara-politika any Nepal i Oliver.
Raha mila mijery sary sy ny vaovao farany momba ny PDA finday farany tonga tany Pakistan ianao, dia vakio ny lahatsoratra Go2Net. Saj Shirazi indray manana tantara mahafinaritra momba ny dia any Chillas, tanàna kely misitrika ao Avaratr'i Pakistan, izay lahatsoratra mahaliana ho an'ireo mpitety firenena, anisan'izany i Marco Polo. Manana sary sy tantara momba an'i Khyber Pass i Fiona. I Ramla ao amin'ny Karachi Metroblogging indray manana lahatsary Google momba an'i Karachi, ary miaraka amin'ny mozika ity diaporama ity ka betsaka aminareo no hahafantatra ity mpihira Pakistaney, Nusrat Fateh Ali Khan mihira amin'izany.
Relief for Sri Lanka manipika ny fandraisana anjaran'i Rebecca, 11 taona amin'ny Tetikasa Mamaky-Manoratra Sri Lanka. Phil Bogle mizara sary mahafinaritra momba an'i Sri Lanka.